Certified HR Executive – TopHR
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် HR Management လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်စီမံရသည့် “HR Executive” အဆင့်ရာထူးများအတွက် စနစ်တကျ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသွားမည်။Labour Laws နှင့် excel အသုံးပြုလစာရေးဆွဲနည်းComputer သင်တန်းပါ ပါဝင်သည်။
Module (A) HR Management – total 27 Hours
The Role of HR in Business Organisation (3hours)
Factors affecting employee behaviour (3 hours)
People Resourcing (6 hours)
Performance Management (3 hours)
Reward Management (3 hours)
Learning and Development (3 hours)
Health, Safety & Welfare (3 hours)
Employee Relations & Legal Compliance (3 hours)
Module (B) Soft Skills & Ethics – total6hours
Business Communication Skills & Manners (3 hours)
HR Ethics in the Workplace (3 hours)
Module (C) ICT Skills – total 11 hours
Visio Software for drawing Organisation Chart 1 hours
Powerpoint Presentation tips2hours
Excel for Payroll 8 hours
✅ Multiple Choice Question 1 hours
✅ Group Presentation တစ်ကြိမ် ပါဝင်ပြီး
MCBA သင်တန်းကျောင်း နှင့် TOP HR ပူးပေါင်း ပေးအပ်သော Certified HR Executive လက်မှတ် ရရှိပါမည်။
✔️စုစုပေါင်း သင်တန်းကာလ (၃) လ၊ (44)နာရီ
✔️သင်တန်းကြေး ကျပ် နှစ်သိန်းနှစ်သောင်း (MMK. 220,000/-)
?Including Reference Books, Exercise Book, Lecture Handouts, Labour Laws & Payroll for Excel
*Computer Module မတက်ရောက်ပါက သင်တန်းကြေး Ks. 40000/- Discount ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
?Early Bird Discount
ဇန်နဝါရီလ (26) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ သင်တန်းကြေး Cashdown ပေးသွင်အပ်နှံသူများ အတွက် early bird ၁၀% Discount (ကျပ် တစ်သိန်း ကိုးသောင်း ရှစ်ထောင်ကျပ်သာ)
?TOP HR သင်တန်းသားဟောင်းများ
ကျောင်းသားဟောင်းများ အတွက် အထူးနှုန်းထား 10% Discount
?အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်ရန် အတွက်လဲ အဆင်ပြေအောင် ညှိနှီုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
*အရစ်ကျ ပေးသွင်းမှုအတွက် Discount ခံစားခွင့်မရှိပါ။
? ကျောင်းသားဟောင်းများအနေဖြင့် ဇန်နဝါရီလ (26) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားလာရောက်အပ်နှံပါက ကျောင်းသားဟောင်း Discount နှင့် Early bird နှင့် ၂ မျိုးစလုံးခံစားခွင့်ရှိသည်။
‼️‼️ ထိထိရောက်ရောက် ဆွေးနွေးသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်
သင်တန်းသားဦးရေ (၂၀)ဦးသာ ကန့်သတ်ထားပါသည်။
ပညာအရည်အချင်း – တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီး သူဖြစ်ရမည်။ Computer အခြေခံသင်တန်း တက်ရောက်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
လုပ်သက် အတွေ့အကြုံ – HR လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၁) နှစ် ရှိရမည်။
(3.2.2019 )တွင်စတင်ပြီး (28.4.2019) တွင်ပြီးဆုံးပါမည်။ (၃) လသင်တန်း
3rd February 2019 အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း
နေ့လယ် ၁ နာရီမှ ၄ နာရီ (Lecturer ချိန်)
ညနေ ၄:၃၀ မှ ၅:၃၀ (computer ချိန်)
(စာသင်ချိန်နှင့် Computer ချိန်ကြားတွင် နာရီဝက် အနားပေးပါသည်။)
Module (A) Human Resource Management
ဒေါ်အေးမာလတ် (BSc.Maths, EMBA)
Module (A) Myanmar Labour Laws
ဒေါ်မော်မော်ထွန်း (BA.IR, DMA, DBA, DIL)
Module (B) Soft Skills & Business Manners
ဒေါ် ဖြူဖြူခိုင် (BA.IR, MA.IR, Dip in Applied Psychology, CAES, DBM, Certified ILO-SYIB Trainer)
Module (C) Computer Skills
ဒေါ်ချိုချိုထွန်း (B.Sc (Zoology), Post Graduate Diploma in Education, Post Graduate Diploma in Computer Science)
Myanmar Career Bridge Academy (MCBA)
ဒဂုံစင်တာ (II)၊ (၅)လွှာ၊ YKKO ဆိုင်ဘေး၊
မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း099 77 90 66 40
webadmin slider css3, html5
Older PostTOP HR Solutions မှ စုဆောင်း ထုတ်ဝေသည့် မြန်မာအလုပ်သမားဥပဒေပေါင်းချုပ်စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ
Newer Postအလုပ်ရှင်တိုင်း ၊ အလုပ်သမားတိုင်းအားထားရမယ့် စာအုပ်